Fahalalana… fahalalahana | NewsMada
3 mey, Andro iraisam-pirenena ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety. Mby iza? Akondro mahia misy masaka, saro-dazaina amin-kavana. Vao herinandro izay ny amin’ny raharaha fampiatoana amin’ny haino aman-jery ny fandaharana misy adihevitra politika, toekarena, sosialy… ao anatin’izao hamehana ara-pahasalamana iadiana amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao.
Soa ihany, efa niravona ny raharaha taorian’ny fifampidinihana: naato ny fampiatoana. Izay no maha zava-dehibe hatrany ny fifampidinihana na fakan-kevitra amin’izay lazaina sy atao? Atao izay lazaina, lazaina izay atao. Inona na ahoana koa ny manaraka? Ady fiady hatrany ny fahalalahana. Izay tsy miady, miaritra fotsiny; izay tsy mahafehy, fehezina. Arakaraka ny fifandanjan-kery io.
Ny fahafahan’ny tena, tsy midika ho fahazoana manitsakitsaka ny fahafahan’ny hafa; ny fahefan’ny tena, tsy midika ho fahazoana manao izay tiana hatao amin’ny hafa. Eo ny lalàna ifampifehezana sy ifanaraha-maso. Izay matoky tena no afa-katoky ny hafa sy azo itokisana, izay itokisana koa no matoky tena amin’ny ataony. Tsy tongatonga na mandeha ho azy amin’izao ny fifampitokisana.
Ny fijery sy fiheverana mandeha ila no mahatonga ny tsy fifampitokisana, fahatahorana… Inona no itanisana izany rehetra izany amin’ity hoe fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety ao anatin’izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao? Raha samy manadio ny tokotaniny, hono, ny tsirairay, madio ho azy ny tanàna. Tsy manadio tena fa manadio tokotany: sehatra isiana, iasana…
Misy tsy mahalala na tsy mahay izay lazainy sy ataony? Tanàna tsy ilaozan’adala. Ny tsy fahaizan’ny sasany mitondra fiara ve, ohatra, no hanovana ny fitsipiky ny fifamoivoizana? Na ny tsy fahalalana na ny finiavan’ny sasany tsy hanaja fitsipiky ny fifamoivoizana no ndeha hijerem-potsiny izay loza mety na ahina hitranga, na tsy misy avela handeha … Ao anatin’ny lalàna ny fahalalahana. Fanajana lalàna ihany no lalana?